HomeTURKEYGobolka Marmara54 Sakarya
Heshiis ayaa la saxeexay inta u dhaxaysa TÜVASAŞ iyo ASELSAN, halkaas oo Qorshaha Tareenka Korantada Qaranka lagu dhisi doono inta u dhexaysa 'Barnaamijka 12 ee Maalgashiga' oo la daabacay 2020ka Feebarwari 11 isla markaana loo diyaariyay si waafaqsan himilooyinka 2020aad ee Qorshaha Horumarinta. Heshiiskan [More ...]
TÜVASAŞ booqashada Madaxweynaha Turkiga Kamu-Sen Önder Kahveci, annaga oo ogaaney in nooc tareen korontada qaranka aluminium lixaad qaba bilaabay in la soo saaray, la gaarey xawaare ah 225 kiiloomitir ah nooc tareen korontada noqon doona mashruuca ku saabsan in uu yahay ilaa dhamaadka [More ...]
Sakarya Dawlada Hoose ee Magaalada Feebarwari Kulankii Golaha Feebaraayo waxaa lagu qabtay Hoolka Golaha Dowlada Hoose ee Magaalooyinka. Kulankii 4 ajandaha ajandaha iyo 48 ajendaha laga dooday kadib khudbadaha ajandaha ka dib, Madaxweyne Ekrem Yüce, oo ah taraamka nostalgic [More ...]
Duqa magaalada Ekrem Yüce, oo sharraxaad ka bixisay shaqooyinka socda ee labanlaabmay ee shaqada wadooyinka u noqon doona badal u noqoshada gaadiidka degmada xarunta Arifiye, ayaa yiri, “Waxay kusii socotaa wadada kaliya kadib Warshadda Tank Pallet oo ka socota Terminal Junction iyo Demir [More ...]
Maareeyihii hore ee TCDD İsa Apaydın Machadka Farsamada
Semester-kii gu'ga ayaa ku bilaawday waxqabadyadii casharkii ugu horreeyay ee SUBÜ. Casharadii ugu horreeyay ee muddadaas, magacyo caan ah iyo wakiillo waaxeed ayaa la yimid ardayda dhigata kulliyadaha iyo iskuulada xirfadda. Jaamacadda Sakarya ee Cilmiga Sayniska [More ...]
Qaybta u dhaxaysa isgoyska Adapazarı-Istanbul ee Beşköprü iyo Donatım waxaa lagu dhawaaqay inuu yahay shahaadada koowaad ee Goobta Archeological. Sida ay ogyihiin macluumaadka la helay, wadada tareenka iyo dhismaha xarunta gudiga ilaalinta ee dhaxalka dhaqameed ee Kocaeli, tareenka [More ...]